Wasiirka Dekedaha Puntland Oo Digniin U Jeediyay Ganacsatada Puntland, Kana Jawaabay Cabashadooda | puntlandi.com
Monday, October 30th, 2017 | Posted by Pi
Wasiirka Dekedaha Puntland Oo Digniin U Jeediyay Ganacsatada Puntland, Kana Jawaabay Cabashadooda
Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka badda Puntland Siciid Maxamed Raage oo Warbaahinta kula hadlay Dekeda magaalada Boosaaso, ayaa sheegay inaysan dawladu xirin Dekeda Boosaaso, wuxuuna xusay in sido kale aysan jirin wax khidmad ah oo ganacsatada lagu kordhiyay.
”Wax khidmad ah lama kordhin shacabka reer Boosaasow, ma jirto wax Deked ah oo la xiray, Badeecadda caadiga ah ee Canshuurta wax laga badalay ma jirto, maamulka Dekedu waa wareegay Nidaam ayuu ku wareegay P&O ayaa maamulaysa Dekeda, waxaan ka codsanaynaa ganacsatada inay Doonyaha soo xiraan oo ay dadka u dejiyaan Alaabta” Ayuu yiri Wasiirku.
Siciid Maxamed Raage ayaa sheegay in Doonyaha la geeyay bannaanka Dekeda, haddii aysan ku xiranayn Dekeda inay u fasaxan yihiin inay aadaan Dekedaha kale.
”Haddii Doontu aanay wax dejinayn oo Dekeda aysan kuso xirayn dee Dekedaha kale geeya, nimanka Arbaabada ah ee Doonyaha waxay doonaan inay sameeyaan ma aha, dawladu Xaq bay u leedahay inay awooday doonto samayso” Ayuu yiri isaga oo hadalkiisa sii wata.
Mar uu u digayay dad uu sheegay inay fidno ka dhex wadaan bulshada ayaa wuxuu yiri……”Dadka fidnada la dhex maraya magaalada oo cid kasta ku dhex jirto oo Xagjirkii ku dhex jiro, oo kuwo dhibta magaalada ka jira ay ganacsi u tahay, waxaan aad iyo aad uga codsanayaa ganacsatada inay shacabkooda ka naxaan, wixii cabasho qaba waa noo iman karaan waana nala xisaabtami karaan”.
Siciid Maxamed Raage ayaa sheegay inay ka war hayaan dad fidno ka dhex wada bulshada, kuwaas oo uu sheegay inay bulshada ka qabanayaan.
”Waxaan shacabka reer Puntland iyo reer Boosaaso u sheegayaa inaysan Dekeda Boosaaso waxba iska badelin, ninkii dhib kale wata waa ka tagayaa Dekeda oo ma taagnaanayo, shacabku waa inay la socdaan fidno wadayaasha oo raba inay Puntland Muqdisho ka dhigaan, ninka shaarka iyo surweelka kaliya wata oo aan shaqo kale lahayn oo aan meelna kaso kicin oo aan maalina shaqo tagin ma aha inuu dadka been u sheego” Ayuu yiri.
Ugu dambayntii wuxuu sheegay in ganacsatada Puntland ay abuurayaan fidno, ayna doonyihii imanayay Dekeda geeyeen bannaanka Dekeda Boosaaso.
”Nin dhib wada reer Boosaasow yuusan been idiin sheegin, waxaan aad iyo aad uga digayaa oo aan shacabka u cadaynayaa inaysan waxba ka jirin waxa ganacsatada iyo Arbaabadu ay ka cabanayaan, waxaan arkayay gaancsato qaylinaya oo cabanaya oo leh yaa iga soo dejiya, dee adeer ka daa, oo dadka woxooda u dejiya” Ayuu hadalkiisa kuso afmeeray.